Hanti dhowraha guud ee xilka laga qaaday oo xuriyadiisa dib u helay lana dejiyay hoteelka Jazeera – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Hanti dhowraha guud ee xilka laga qaaday oo xuriyadiisa dib u helay lana dejiyay hoteelka Jazeera
Hanti dhowraha guud ee xilka laga qaaday Nuur Faarax Jimcaale ayaa la sheegayaa in maalintii shalay uu xuriyadiisa dib u helay, kadib markii maalintii Jimcaha aheyd lagu amray in hoyga uu madaxtooyadda ka degan yahay aanu ka bixi karin illaa amar dambe.
Odayaal dhaqameed iyo xildhibaano kasoo kala jeeda beelaha H/gidir iyo Raxaweyn ayaa waan-waan iyo wada-hadal dheer kadib isla gartay, in si KMG ah xuriyadiisa dib loo siiyo inta ay dacwadda ku socoto mar haddii xilka laga qaaday.
Nuur Faarax Jimcaale ayaa la sheegayaa in gelinkii dambe ee shalay la dejiyay Hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho, kaas oo ka mid ah hoteelada sida weyn amnigoodu loo illaaliyo.
Wuxuu Nuur Faarax Jimcaale weli ku adkeeysanayaa inuu yahay hanti dhowraha guud ee sharciga ah, isagoona sheegay inaan xilka looga qaadi karin qaabka uu u dhigay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Dhinaca kale, Nuur Faarax Jimcaale oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay inta uu baarlamaanka fasaxa kaga soo noqonaayo islamarkaana ugu codeynayaan xil ka qaadistiisa, inuu isagu yahay weli yahay hanti dhowraha guud ee qaranka oo rasmiga ah.
Ugu dambeyn, xaaladda kiiska dilka wasiirkii howlaha guud iyo xilka qaadista hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa haatan u muuqata mid mugdi sii gashay, iyadoo dhinaca kale ay kusoo baxeen odayaal dhaqameed iyo xildhibaanada labada dhinac oo sheegay inay qaab xeer Soomaali ah arrinta ku dhameyn doonaan.